ဦးဦးဖျားဖျားထွက်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ Samsung Galaxy Note9Unboxing ဗီဒီယို – DigitalTimes.com.mm
နောက်လမှာထွက်တော့မယ့် Galaxy Note9အကြောင်းမသိတာ ဘာတွေများကျန်သေးပါလိမ့်??? ဟိုတစ်စဒီတစ်စထွက်လာတဲ့သတင်းတွေအားလုံးကိုကျော်ပြီး နောက်ဆုံးအဟော့ဆုံးသတင်းလေးကတော့ Galaxy S9 ရဲ့ Unboxing Video လေးပါပဲ။
ဗီဒီယိုမှာပြထားတဲ့အတိုင်း 6.3-inch full rectangle screen, RAM 6GB, Storage 64GB ဖြစ်ပြီး ဒီ unit လေးရဲ့ပရိုဆက်ဆာကတော့ Exynos Chip မဟုတ်ဘဲ Snapdragon 845 ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။
ကျန်တဲ့ Spec တွေကတော့ ကျောဘက်မှာ Optical Image Stabilization (OIS) ပါတဲ့ 12MP+12MP ကင်မရာနဲ့ 8MP auto-focus webcam, IP68 rating, ကြိုးမဲ့အားသွင်းစနစ်နဲ့ AKG နားကြပ်တွေပါမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဘူးထဲမှာတော့ Note 8 တုန်းကလို AKG နားကြပ်တစ်စုံ၊ Adaptive Fash Charger, USB-C ကြိုး၊ USB-C dongle တွေပါဝင်တာတွေ့ရပါတယ်။ ဈေးနှုန်းကတော့ ဒီချိန်မှာမသိနိုင်သေးပါဘူး။ ဗီဒီယိုကိုကြည့်ကြည့်ပါ။
ဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးသွားရင် သတိထားမိတဲ့အချက်လေးတွေရှိပါသလား? ဗီဒီယိုထဲကအမှန်ဆိုရင် Samsung က font ဒီဇိုင်းပဲပြောင်းလိုက်သလား? Galaxy Note9Logo ကိုပဲ rebrand ပြန်လုပ်ထားသလား screen ပေါ်ကစတစ်ကာက Original ဟုတ်ရဲ့လား? ဒါမှမဟုတ် တကယ့် product အစစ်မဟုတ်သေးပဲ ပုံကြမ်းလို့ပဲသတ်မှတ်ရမှာလား?? ဒွိဟတွေ သိချင်စိတ်တွေနဲ့ ဝေခွဲမရဖြစ်ကျန်ခဲ့ကြမယ်ထင်ပါတယ်။
နောကျလမှာထှကျတော့မယျ့ Galaxy Note9အကွောငျးမသိတာ ဘာတှမြေားကနျြသေးပါလိမျ့??? ဟိုတဈစဒီတဈစထှကျလာတဲ့သတငျးတှအေားလုံးကိုကြျောပွီး နောကျဆုံးအဟော့ဆုံးသတငျးလေးကတော့ Galaxy S9 ရဲ့ Unboxing Video လေးပါပဲ။
ဗီဒီယိုမှာပွထားတဲ့အတိုငျး 6.3-inch full rectangle screen, RAM 6GB, Storage 64GB ဖွဈပွီး ဒီ unit လေးရဲ့ပရိုဆကျဆာကတော့ Exynos Chip မဟုတျဘဲ Snapdragon 845 ဖွဈမယျထငျပါတယျ။
ကနျြတဲ့ Spec တှကေတော့ ကြောဘကျမှာ Optical Image Stabilization (OIS) ပါတဲ့ 12MP+12MP ကငျမရာနဲ့ 8MP auto-focus webcam, IP68 rating, ကွိုးမဲ့အားသှငျးစနဈနဲ့ AKG နားကွပျတှပေါမယျလို့ဖျောပွထားပါတယျ။
ဘူးထဲမှာတော့ Note 8 တုနျးကလို AKG နားကွပျတဈစုံ၊ Adaptive Fash Charger, USB-C ကွိုး၊ USB-C dongle တှပေါဝငျတာတှရေ့ပါတယျ။ ဈေးနှုနျးကတော့ ဒီခြိနျမှာမသိနိုငျသေးပါဘူး။ ဗီဒီယိုကိုကွညျ့ကွညျ့ပါ။
ဗီဒီယိုကိုကွညျ့ပွီးသှားရငျ သတိထားမိတဲ့အခကျြလေးတှရှေိပါသလား? ဗီဒီယိုထဲကအမှနျဆိုရငျ Samsung က font ဒီဇိုငျးပဲပွောငျးလိုကျသလား? Galaxy Note9Logo ကိုပဲ rebrand ပွနျလုပျထားသလား screen ပျေါကစတဈကာက Original ဟုတျရဲ့လား? ဒါမှမဟုတျ တကယျ့ product အစဈမဟုတျသေးပဲ ပုံကွမျးလို့ပဲသတျမှတျရမှာလား?? ဒှိဟတှေ သိခငျြစိတျတှနေဲ့ ဝခှေဲမရဖွဈကနျြခဲ့ကွမယျထငျပါတယျ။